सिस्टर (कथा) – Chitwan Post
सामान्यतया बिहानको ११ः३० तिर मर्निङ क्लास सकेर घर फर्किसकेको हुन्थेँ म कलेजबाट । घर आएर खाना खाइसकेपछि एक निद्रा नसुती नहुने, साह्रै नराम्रो बानी थियो मेरो । झ्यापझ्याप बनाउँथ्यो भाते निद्राले ।
एकदिनको कुरो हो, दिउँसोको त्यस्तै १ः०० बज्न लागेको हुँदो हो । म मस्त निद्रामा थिएँ । एक्कासि बजेको फोनको घण्टीले निद्रा नै बिच्काइदियो ।
फोन उठाउँदै बोलेँ–
उताबाट केही अत्तालिएको स्वरमा आवाज आयो ।
‘दाइ सुन्नोस् न, प्रकाश सापकोटालाई चिन्नुहुन्छ नि होइन…?’
‘हजुर…म चिन्छु । मेरो छिमेकी भाइ हो । मेरो साथी हो । किन…के भयो र उसलाई…?
‘बाटोमा उहाँको एक्सिडेन्ट भएछ । हामीले देखेर भर्खरै चितवन मेडिकल कलेजमा ल्याएका छौँ । तपाईं छिट्टो आउनोस् न ल ।’
‘ए…हुन्छ हुन्छ, म आइहालेँ’ भन्दै खल्ल चिसो पानीले मुख धोएर हतार–हतार लागेँ म हस्पिटलतिर ।
२०–२२ किमीको बाटो पनि २०–२२ दिनझैँ लामो लाग्दै थियो मलाई त्यसदिन । झनै, त्यसमाथि बाटोको मर्मतसम्हारले गर्दा ट्राफिक जाम । बल्लतल्ल हस्पिटल पुगेपछि रिसेप्सनिस्टलाई सोधेर बेड नम्बर पत्ता लगाएँ ।
म त्यहाँ पुग्दा प्रकाशलाई इमर्जेन्सीबाट वार्डमा सिफ्ट गर्दै रहेछन् ।
‘मेरो भाइ, साथी, छिमेकी जे भने पनि यही हो, अति मिल्छौँ हामी’ भन्दै प्रकाशलाई हस्पिटलसम्म ल्याउन सहयोग गर्ने ती दुई महान् आत्माहरुलाई आभार प्रकट गरेँ ।
केही क्षणपछि उनीहरुलाई बिदाइ गरी वार्डभित्र छिरेर प्रकाशलाई हेरेँ । उफ्…! मुखभरि चिथोरिएका घाउहरु । हातगोडामा ६–७ ठाउँमा टाँका । म त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै आँखा खोल्यो उसले ।
‘झन्डै मरिनँ नि दाइ…यार, भाग्यले बँचायो आज मलाई । बेक्कार त्यो स्कुटीलाई फलो गरेको ।’
‘स्कुटी…? कसको स्कुटी…? अनि, किन फलो गरेको त स्कुटीलाई…?’ प्रश्नमाथि प्रश्न बर्साएँ मैले उसलाई ।
‘क्या राम्री केटी थिई यार…दाइ…!’
‘चुप लाग हापे…। त्यही केटीको पछि लाग्नाले त यस्तो भयो नि ! ड्राइभिङ गर्दा केटीतिर ध्यान दियो भने हो…यस्तै हुन्छ । झन्डै पछाडिबाट टिप्पर आएको रहेनछ, नत्र ठाउँको ठाउँ ठहरै हुन्थिस् । अबदेखि केटीको कुरा गर्ने होइन’ भन्दै उसलाई सम्झाउने क्रममा अल्लि ठूलै स्वरमा कराएछु ।
मेरो आवाजले हल्ला भएछ क्यारे, पछाडिबाट मधुर स्वरमा केटीको आवाज आयो– ‘ठूलो स्वरमा नबोलिदिनोस् ल, बिरामीलाई डिस्टर्व हुन्छ ।’
साँच्चै, त्यो सुमधुर आवाज…मन–मस्तिष्क नै खल्बल्याइदिने खालको थियो । त्यस्तो मिठास मैले कुनै पनि चीज या वस्तुमा पाएको थिइनँ आजसम्म…।
भर्खरैमात्र प्रकाशलाई ‘अब केटीतिर ध्यान दिने होइन’ भन्दै सम्झाइरहेको म । पछाडिबाट आएको त्यो आवाजले पछाडि फर्किएर नहेरी बस्नै सकिनँ । भाइ प्रकाशलाई अर्ती–उपदेश दिइरहेको म आफ्नै ध्यान यति छिटै भंग होला जस्तोचाहिँ पटक्कै लागेको थिएन । धर्म–संकटमै परेँ म त ती मधुर आवाजकी धनीलाई देखेर ।
‘खै…अल्लि उता बसिदिनोस् त, बिरामीको घाउ सफा गर्नुप¥यो’ भन्दै सेतो ड्रेस अनि नीलो मास्क लगाएकी ट्रेमा औषधिहरु लिएर हाम्रै नजिक आइन् उनी ।
म अल्लिपरको कुर्सीमा सरेर उनलाई एकटकले हेरिमात्रै रहेँ । प्रकाश आँखा बन्द गरेर पल्टिरहेको थियो बेडमा । उनी केही निहुरिएर घाउ सफा गर्न थालिन् । म उनका आँखामात्र देखिने गरी लगाएको ‘मास्क खोले नि हुने नि’ भन्ने झिनो आशमा थिएँ । किनकि, म साह्रै आतुर थिएँ त्यो मीठो बोलीको अनुहारलाई दर्शन गर्न ।
घाउ सफा गर्दै गर्दा उनले मलाई भनिन्–
‘एउटा औषधि अबको पैँतालीस मिनेटपछि दिनुपर्ने छ, के तपाईं दिन सक्नुहुन्छ ?’
पैँतालीस मिनेटपछि मैले पुनः उनलाई हेर्न पाउने भएँ भन्ने मनसायले बाहना बनाउँदै भनेँ–
“कहाँ सक्नु नि ! के लेख्या हो यो, केही बुझेको छैन । मलाई त आउँदै आउँदैन, फिटिक्कै आउँदैन । तपाईंका साथीहरुलाई पनि यससम्बन्धी पूर्ण ज्ञान छ कि छैन ? फेरि केही तल–माथि भैदियो भने । औषधिजस्तो कुरामा हेलचेक्र्याइँ गर्नु पनि त भएन नि, होइन र…? बरू, तपाईं आफैँ आएर दिनोस् न है ।’
‘आउन त मैँ आउने हो, तर पनि तपाईंले सक्नुहुन्छ कि भनेर सोधेको’ भन्दै प्रकाशको पिठ्युँमा एउटा पेनकिलरको इन्जेक्सन दिएर गइन् उनी ।
उनी गइसकेपछि मैले प्रकाशलाई सोधे–
‘अनि प्रकाश…डिस्चार्जचाहिँ कहिले गर्छ रे त ? केही भन्यो ? मैले पनि अघि सोध्नै भुलेछु सिस्टर (नर्स)लाई ।’
‘खै दाइ…भोलितिर हुन्छ होला डिस्चार्ज त । त्यही भन्दै थिइन् तपाईं हस्पिटल आइपुग्नुभन्दा केही समयअगाडि ती नर्सले ।
‘ला…हो र ? कति छिटो के…? घाउ त ठूलै लाग्या देख्छु त म…! पूरै ठीक नभएसम्म डिस्चार्ज गर्नुहुन्न भाइ ।’
‘के भन्नुहुन्छ दाइ यार…? सामान्य चोट रै’छ, औषधि नियमित लिएर घरमै बेड रेस्ट ग¥यो भने दुई–चार दिनमा निको हुन्छ भन्दै थिई त, त्यो नर्सले । के तपाईंलाई म हस्पिटलमैँ बसिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? भोलि नभए पर्सिसम्ममा त पक्कै डिस्चार्ज गरिदिन्छ दाइ, मलाई ।’
लगभग पैँतालीस मिनेटपछि पुनः उनी औषधि र घाउ सफा गर्ने सामान लिएर आइन् र भनिन्–
‘बिरामीको अलिकति लुगा खोलिदिनोस् त ।’
मैले प्रकाशको लुगा अलिकति खोलिदिएँ । धड्कन तीव्र गतिमा बढ्दै थियो मेरो । उनले लगाएकी अत्तरको वासनाले कतै गुलाफकै फूल नै त छैन मेरो वरिपरि भन्ने भान हुँदै थियो मलाई । उनका गाजलु ती ठूला–ठूला आँखा । नमिलाइएका भए पनि साह्रै राम्रा देखिने ती दुई आँखीभौँहरु । कालो र बाक्लो कपाललाई चुल्ठो बनाई त्यसमा कलम सिहुरिएकी । शिरदेखि पाउसम्म उनलाई नियालेर कत्ति पनि थाकेनन् मेरा दुई आँखाहरु । उनी उभिएको बेला सामान्य ढंगले आफू पनि उभिएर उनको हाइट नापेँ । हाइट मिल्यो । त्यही बेला उनले हाच्छिउँ गर्दै मास्क खोलिन् । हाय…! चन्द्रमा नि ईष्र्याले भुतुक्कै हुने खालको उनको रुप । झनै, त्यसमाथि पूर्णिमाको जूनमा प्रस्ट देखिने कालो दागजस्तै तल्लो ओठमुनि चिउँडोको दाहिने भागमा सानो कालो कोठी, ठ्याक्कै मेरैजस्तो । ती गुलाबी ओठहरु । टम्म मिलेका अनारका दानाजस्ता चम्किला दाँतका पंक्ति…उफ्…!
म बेहोस नै पो हुन्छु कि जस्तो भएँ । उनलाई देखेपछि एकोहोरो टोलाइरहन मन लाग्यो । उनका ती कोमल हातले मलाई स्पर्श गर्दै उनले भनिन्–
‘उहाँको दाहिने गोडा समाइदिनोस् न ल, म यो एउटा औषधि सिरिन्जबाट लगाइदिन्छु ।’
‘हस्, हुन्छ । भैहाल्छ नि !’
औषधिको बट्टालाई माथि पारेर सिरिन्जमा औषधि भर्दै उनी निहुरिन थालिन् । जब उनी निहुरिइन् उनको सेतो कोटको खल्तीबाट आईडी कार्ड भुईँमा खसेर घुम्न थाल्यो…।
घुम्दै गरेको उनको आईडीमा मैले नाम खोज्न थालेँ र मनमनै सोचेँ–
‘नाम पत्ता लगाउँछु र फेसबुकमा उनको नाम सर्च गरी फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछु । यदि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिनन् भने म्यासेजद्वारा रिक्वेस्ट पठाउँछु ।’
जसरी भए पनि फकाएर पट्याई छाड्ने चाहनाले डेरा जमायो मेरो मन–मस्तिष्कमा । घुमिरहेको उनको आईडी बिस्तारै–बिस्तारै रोक्किँदै थियो । जसोतसो नाम पढ्ने आँट गर्दै ति मसिना अक्षरहरुलाई नियालेर हेरेँ । क्ष्उकज…अनि त्यसपछि के हो यार…? हरे…कस्तो नदेखिएको…? (आफैँले आफैँलाई प्रश्न गरेँ ।)
(…ष्तब) ‘इप्शिता ।’
बल्ल बल्ल नाम त पढेँ, तर इप्शिता त धेरै होलान् फेसबुकमा । कसरी चिन्नु फेरि…? थर पत्ता नलगाएसम्म त गाह्रो पो हुने भो त भन्ने सोची फेरि आईडी पढ्ने कोसिस गरेँ । तर, उनी त सिरिन्ज हानेर आईडी टिपी जाने तरखर पो गर्न थालिन् । लौ प¥यो बित्यास…! मलाई उनको थर पत्ता लगाउन नपाएकोमा साह्रै छटपटी हुँदै थियो । अनि अचानक मेरो दिमागमा नयाँ आइडिया आयो । जानी–जानी प्रकाशलाई सिरिन्ज हानिसकेपछि लगाइएको कटन (कपास) निकालेर फ्याँकिदिएँ र उनलाई भनेँ– ‘एक्सक्युज मी सिस्टर…कटन त खसेछ त । सिरिन्ज हानेको ठाउँबाट ब्लिडिङ पनि भैरहेको छ, अर्को कटन लगाइदिनोस् न प्लिज ।’
‘हुन्छ’ भन्दै एक टुक्रा कटन निकालेर लगाइदिन उनी फेरि निहुरिइन् । संयोग भनौँ या के…जब उनी निहुरिइन्, आईडी उसैगरी भुइँमा खस्यो र घुम्न थाल्यो, जसरी पहिला घुमेको थियो । सायद् उनले आईडी खल्तीमा त्यति राम्ररी राखेकी थिइनन् होला । नाम त मैले पत्ता लगाइसकेको थिएँ । तर मलाई जसरी भए पनि उनको थर पत्ता लगाउनु थियो । घुम्दै गरेको आईडीमा थर खोज्न थालेँ । अगाडिको अक्षर (प्ज…) देखेँ । सायद् प्जबमपब, प्जबचभ,ि प्जबपगचभ,ि प्जबलष्थब… केही होला भन्ने अनुमान गरेँ मैँले ।
त्यसपछि पजब… देखेँ ।
प्जबल… पनि देखेँ । घुमिरहेको आईडी रोक्कियो । खुसी भएँ । आईडी रोक्किएपछि हतार–हतार आईडी नियालेँ । अफसोस…! आईडीमा त उनको थर थियो प्जबलब ि(खनाल) । एकछिन त तीन किलाको घनले टाउकामा प्रहार गरेजस्तै रन्थनिएँ म । टाउकै फनन घुमेझैँ लाग्न थाल्यो । वरिपरि सबै चीज धमिलो लाग्न थाले । बेहोस नै हुन्छु जस्तो भएँ । अनि, बिस्तारै उनलाई सोधेँ–
‘बैनी, बिरामीलाई आजै डिस्चार्ज गर्न मिल्दैन र ?’
‘किन र आजै…? अघि त पूरै ठीक भएपछिमात्रै डिस्चार्ज गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो त साथीसँग । आजै त अल्लि मिल्दैन होला । तपाईं नै हो उहाँको कुरूवा ?’
‘हजुर… मै हो…!’
‘ए…अनि तपाईंको नाम…?’
‘राजन खनाल…’, मैले भासिएको स्वरमा आफ्नो परिचय खुलाएँ ।
‘ए… हामी त दाजुबहिनी पो परेछौँ । म पनि खनाल हुँ । इप्शिता खनाल ।’
“सुन्नोस् त दाइ ! यो औषधि लिएर आउनोस् ल, एकछिनपछि बिरामीलाई दिनुपर्छ’ भन्दै एउटा कागज मेरो हातमा थमाइदिइन् ।
मुन्टोले ‘हुन्छ’ को इशारा गर्दै उनले हातमा थमाइदिएको प्रेस्क्रिप्सन लिएर गह्रौँ पाइला चाल्दै लागेँ म फार्मेसीतिर…।